Pogba waa 25-jir mana Yaqaano sida loo DABAASHO oo SAWIR uun ayuu ku soo galaa Barkadaha lagu Dabaasho!! – Gool FM
Pogba waa 25-jir mana Yaqaano sida loo DABAASHO oo SAWIR uun ayuu ku soo galaa Barkadaha lagu Dabaasho!!
Byare November 19, 2018
(Europe) 19 Nof 2018. Paul Pogba waa 25-jir mana yaqaano sida loo dabaasho oo hadda ayuu dabaal barad yahay sida ay sheegayaan warar dhawaan gal ah.
Xiddiga reer France ayaa la sheegayaa inuu aad uga cabsado biyaha tan iyo yaraantiisa weligiisna horey iyo gadaal uma dabaalan inkastoo ay jirto inuu marar badan isku soo sawiray Barkado lagu dabaasho oo aad u qaali ah.
Warsidaha Daily Star ayaa ogaaday in laacibka qadka dhexe uu iminka qaato cashar joogta ah ay siyaan shaqalaha tababarka Man United, Wuxuuna hoosta ka xariiqday yool cusub oo ah inuu si la yaqaano dabaasha u barto 2019.
Warar laga helay gudahay Old Trafford ayaa tibaaxaya in laacibka uu iminka garowsaday inay ahayd inuu yaraanta ku soo bilaabo dabaal barashada, Saaxiibada laacibka ayaana kula taliyay inuu ka guuleysto cabsida ka heysata biyaha iyadoo uuna ugu dambeyn qaatay Waanada ay u soo jeediyeen saaxiibadiisa.
Pogba oo aalaabay baashaal ula baxa saaxiibadiisa ayaa la sheegayaa in marka ay dabaasha timaado uusan marna madaxa galin biyaha ama uusan hoos u quusin maadaama uu biyaha ka cabsado isla markaana uusan garaneyn dabaasha.
SHAN ka mid ah xidigaha kooxda Real Madrid oo la filayo inay seegaan kulanka Eibar ee La Liga